तुरुन्तै लकडाउन गर्न चिकित्सकको सुझाव !
काठमाडौँ : काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य अस्पतालहरुमा कोरोनाका बि’रामी उप’चारका लागि व्यवस्था गरिएका आइसि’यू र शय्या भरिएका छन् ।
शय्या भरिएपछि अस्पतालहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा अन्य’त्र रेफर गर्नुपरेको जनाएका छन् ।
दो’स्रो लहरको को’रोना संक्र’मणपछि पनि मानिसले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेको, भी’डभाड हुने कार्यक्रम जारी
राखेकाले संक्र’मण ती’व्र रुपमा फैलिरहेको उनीहरुले औँल्याएका छन् । सरकारले उपचारका लागि शय्या विस्तार गरे पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौति हुने स्थिति रहेको वीर अस्पतालका चिकित्सक डा. अच्युत कार्कीले बताए ।
सरकारले सं’क्रमणको चेन ब्रे’क गर्न कम्तिमा दुई साताका लागि लकडाउन गर्नुपर्ने सु’झाव चिकि’त्सकले दिएका छन् । ‘अब कम्तिमा दुई साताका लागि लकडाउन नगरेमा नि’यन्त्रण सम्भव देखिँदैन
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कोभि’ड उ’पचार संयोजन डा. विमल पाण्डेले भने । ती’व्र संक्र’मण निय’न्त्रण गर्न अति आवश्यकबाहेक अन्य सेवा बन्द गर्नुपर्ने सु\_झाव त्रिवि शिक्षण अस्पतालका को’भिड उपचार सम्पर्क चि’कित्सक सविन थपलियाको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मापदण्ड पालना हुन नसकेपछि अर्को कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आइसकेको उनले बताए । याे खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।
२०७८ बैशाख १०, शुक्रबार १७:५० गते 1 Minute 591 Views